musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Iyi ndiyo nzira yekupedzisa denda paPasi?
Health News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo itsva "Roadmap yekupedzisa Pandemics" iri kugoverwa nenhengo dzeASEAN dzeParamende uye inodaidza "Natural Dziviriro mushonga chete unogara kwenguva refu," ichiti nzira yekudzivirira Pasi iri kuburikidza ne "Imwe Hutano."
Mamwe maparamende nehurumende dzenhengo dzeASEAN nyika dziri kutenderera kune imwe Hutano nzira yekudzivirira denda remangwana.
Kudzivirira kunodhura 0.2 muzana yegore negore kupora uye kugadzirira uye inofanirwa kuve yakabatanidzwa muchirongwa chega chega "Vaka Kudzoka Zvirinani".
"Roadmap" yakafumurwa nemasangano makumi masere + anotungamira hurumende, makambani, nharaunda, uye vanhu pachavo maitiro ekuwedzera mhinduro dzekudzivirira denda.
Mubatanidzwa wepasi rose wevashandi mukuchengetedza, zvekurima, hutano, chengetedzo, mari, uye kutaurirana, EndPandemics, nhasi yaburitsa nzira yemubatanidzwa yekudzivirira madenda emunguva inotevera kumusangano wakasarudzika wevamiriri veParamende yeSangano reSoutheast Asia Nations (ASEAN) uye nyika dzinoongorora.
Pakati pekuwedzera kwepasirese kweanosiyana-siyana ehutachiona hweSARS-CoV-2, iyo ASEAN Inter-Paramende Assembly (AIPA) yakazvipira kuongorora pamwe nekusimudzira nzira dzinoshanda dzekudzivirira denda uye vakabvuma kufunga nezveOne Hutano nzira. Yakakosha "Executive Webinar yekuDzivirira Pandemics" yakarongedzwa neAIPA pamwe neayo MOU mudiwa, Freeland uye iyo EndPandemics mubatanidzwa.
Imwe Hutano inosanganisa matanho ayo panguva imwe chete anotarisana nehutano hwevanhu, hutano hwemhuka (kusanganisira mhuka dzinochengetwa uye mhuka dzesango), uye hutano hwezvakatipoteredza kudzikisa njodzi dzekuputika kwepathogen kwadzinobva. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvezvirwere zvese zvinotapukira (zvinosanganisira HIV, Ebola, SARS, MERS, uye COVID-19) zvinobva mumhuka.
Vagadziri vemitemo nevamwe vakuru kubva kuBrunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, neVietnam, pamwe neCanada, European Parliament, New Zealand, neRepublic of Korea, ndivo vakatanga kuongorora nekukurukura nezve "Roadmap to End." Pandemics: Kuzvivaka Pamwe Chete, ”inoisa chirongwa chitsva chemhinduro dzekudzivirira denda.
Iyo Roadmap inopa yakavhurika sisitimu yekushandira pamwe kwehurumende, mabhizinesi, nharaunda, veruzhinji, uye vanhu pamwe chete pazvikamu zvina zvekutanga zvekudzivirira denda: (4) kuderedza kudiwa kwemhuka dzesango, (1) kubvisa kutengeserana kwekutengeserana mumhuka dzesango, ( 2) kuchengetedza uye kudzoreredza magariro, uye (3) kuita mapurazi edu nehurongwa hwekudya hwakachengeteka uye hune hutano.